Shengxin Sports ibamba izandla kunye Youfa Group, kunye zalo eziluncedo ezihlobeneyo ezinye bafune ekhawulezayo yobhekiso phambili. - China Tianjin Shengxin Iimpahla Sports
Honours & izitifiketi
Shengxin Sports ibamba izandla kunye Youfa Group, kunye zalo eziluncedo ezihlobeneyo ezinye bafune ekhawulezayo yobhekiso phambili.
Kunye nokuphuculwa okuqhubekayo imilinganiselo yabantu abahlala kunye nokunyuka ngamandla alo mbutho qete wesizwe, imveliso kwezixhobo zemidlalo uya kuthi abe lishishini ukuphuma, kwaye isithuba kwemarike uya kuba ngakumbi ebanzi ngakumbi. Imveliso ephambili Youfa Group, umbhobho sentsimbi nge welding, yengundoqo i ekrwada eziphathekayo izixhobo zemidlalo. Kungenxa yoku ukuba Shengxin Sports and Youfa Group sele ziphunyezwe ngempumelelo intsebenziswano zisekelwe kumgaqo complementarity efanayo, obazakunceda lamazwe womabini kunye nokuzuza macala: Youfa Group utyale imali kwi Shengxin Sports kwaye abasebenzi zolawulo kunye namava nolawulo sisityebi. Ukubonelela ngeendawo ukwandisa imisebenzi, yonke imibhobho intsimbi efunekayo Shengxin Sports zithengwa kwi nkampani ze Youfa Group.
Intsebenziswano yale projekthi asinto nje lithuba Shengxin Sports ukomeleza amandla kunye nokwandisa amandla alo okukhuliswa kwaye nokuphuhlisa ngokukhawuleza. Kwakhona umzamo nobusebenza yi Youfa Steel Pipe Industry Chain ukwandisa esezansi kwaye ngenisa ishishini izixhobo yezemidlalo.
ixesha Post: Jul-19-2018